Izimali eziphezulu ze-Forex kuya ku-Trade ku-2019 - I-Best Pair Currency ku-Forex Trading
Izimali eziphezulu ze-Forex kuya ku-Trade ku-2019 - I-Best Currency Pairs
Izici eziyisisekelo ze-EUR / USD ukuhweba
Amandla amabili amakhulu kunazo zonke ezomnotho emhlabeni akungabazeki ukuthi i-European Union ne-United States of America. I-dollar, ebizwa nangokuthi i-Greenback, iyinani lemali elidayisa kakhulu kunazo zonke emhlabeni kanye nokubanjwe kakhulu, okwenza i-EUR / USD ibe yizibili zezinhlobo zemali ezaziwa kakhulu futhi ezithandwayo.
Ngenxa yesimo esiqhubekayo sokuthengiswa kwezimali, lo mbhangqwana unikeza ukusakazwa okuphansi kakhulu njengokhetho lokuqala lwabadayisi abafuna inzuzo ekutshaleni izimali ezimakethe zezezimali. Izinqumo zokuhweba ezingaziwa kanye nezinqubo eziningi zokuhweba zingasetshenziswa kulezi zibhangqwana, ngenxa yomthombo ocebile wedatha yezomnotho nezezimali ezithonya ukuqondiswa kwemanani emakethe. Ngakho-ke, amathuba amaningi okuvuleka okwenza inzuzo enkulu yezimali avele kusukela ezingeni eliguqukayo lokungazami okubonakalayo kulo mbhangqwana.
Isiqondiso se-EUR / USD intengo yemakethe yokuhweba ishiwo amandla okuqhathanisa yalezi zimboni ezimbili eziphambili ezihola phambili. Njengoba kuchaziwe nje, uma konke okunye kuhlala kusekhona futhi umnotho waseMelika ubhalisa ukukhula okusheshayo, kuzokwenza iDola liqinise ngokumelene ne-Euro ebuthakathaka. Okuphambene nalokho uma i-Eurozone ibona ukukhula komnotho wayo, okuzoholela i-Euro ibe nesimo esinamandla, uma kuqhathaniswa ne-Dollar ezokwenza buthakathaka.
Enye yamathonya amakhulu ekuguqulweni kwamandla okulinganisa yizinga lezinga lentela. Lapho amazinga ezithakazelo zemali yaseMelika enamandla kunaleyo yezomnotho oyinhloko waseYurophu, ibhalela imali eqinile yase-US ngokumelene ne-Euro. Uma amazinga ezithakazelo e-Euro anamandla, i-Dollar evamile imonsa. Uma usho lokhu, amanani entengo yedwa ayimemezeli ukuhamba kwamanani emakethe yemali.
Dynamics EUR / USD kakhulu ubuswa Ukuntengantenga kwesimo sezombangazwe ka yeYurobhu iba, njengoba kuyiqiniso neyaziwayo kabanzi ukuthi yeYurobhu iba yindawo ekuhlolwa ngoba imithetho yezomnotho yamanje yemali ephathekayo. Izinhlobonhlobo zezinguquko ezingalindelekile kanye nokwahlukana phakathi kwamazwe ahlanganisa i-akhawunti ye-EU yeDolala enamandla ngokumelene ne-Euro.
Lezi izici zokuhweba ze-EUR / USD okudingeka wazi ngaphambi kokutshala imali ebantwini abadumile kakhulu emakethe.
Izici eziyisisekelo ze-GBP / USD yokuhweba
I-GBP ebizwa nangokuthi Ikhebula, i-British Pound noma ngisho ne-pound sterling, ijwayele ukuhweba ebangeni obubanzi phakathi nosuku. I-GBP / USD iyaziwa njengesibili semali eyingqayizivele kakhulu futhi engavamile njengoba kungavamile ukubona ama-alamu wamanga nokunyakaza okungenakulinganiswa. Ukuba nezinguquko ezingabonakaliyo ngentengo yayo ukukhanga okukhulu kwabathengisi bezinto ezenzekayo kanye nokutshalwa kwezimali kwabaqalayo.
Ukusetshenziswa kobuchwepheshe bezobuchwepheshe kanye nezindaba eziyisisekelo ezivela e-United Kingdom nase-US yizizathu ezivamile zokudayisa lo mbhangqwana ngendlela enolwazi okusiza ukwandise amathuba okuzuza. Kunezeluleko ezinhle ezimbalwa okudingayo okufanele uzicabangele uma ukhetha ukuhweba GBP / USD. Ukwakha isu elihle kakhulu lokuhweba ngokusekelwe ekuzigcineni uziqhathanisa nezindaba zombili zomnotho ikakhulukazi ukukhomba nokugcina ukukhishwa kwezindaba ezingalindelekile ezingabangela ukuziphatha okungaqondakali kule ntengo yamakethe.
Izici eziyisisekelo ze-USD / JPY ukuhweba
I yen okuyinto imali kakhulu liquid in yonke umnotho wase-Asia ubuye ifomu proxy yonke ukukhula kwezomnotho Asia. Uma ukungazinzi kubonakala emkhakheni we-Asia, abathengisi ngokuvamile baphendula ngokuthengisa noma ukuthenga i-yen njengendlela yokuthunyelwa kwezinye zezimali zesizwe sase-Asia ezingekho lula ukuzohweba. Kufanelekile ukuphawula ukuthi umnotho waseJapane ubhalise isikhathi sokurekhoda ukukhula okuphansi kwezomnotho kanye nezindleko eziphansi ezenzalo. Lapho uhweba i-USD / JPY, inkomba ehamba phambili yesikhombiso sayo samanani esizayo ngumnotho waseJapane okufanele siwuqaphele.
Imibuthano eminingi ye-forex ibona indima ye-Yen enethonya ekuthengiseni izinto. Ngenxa yenqubomgomo yezinga lentengo ephansi kakhulu yaseJapane elibheke kakhulu kuma-1990 kuya ku-2000, abahwebi bakhokhele imali yaseJapane ngezindleko ezincane base bezisebenzisa ukutshala imali kwezinye izimali ezingcono. Lokhu kudala izinzuzo ngokuhluka kwamanani.
Ngakho-ke esimweni somhlaba wonke, ukuboleka njalo kwe-Yen kwafakazela ukwazisa ukuba ngumsebenzi onzima. Noma kunjalo, i-Yen isebenza ngezisekelo ezifanayo eziyisisekelo njenganoma iyiphi enye imali.
Enye yamathonya amakhulu adally e-Japanese currency value yi-US Dollar. Ukuziphatha okungaqiniseki ukuthi kungani abathengisi be-forex basebenzisa ukuhlaziywa kobuchwepheshe ukuze baqonde ukuguqulwa kwaleli bhangqa, ngesikhathi eside. Izinga lokuhweba njalo lingase lihluke kusuka ku-30 noma i-40 pips kuya phezulu njenge-pips ye-150.